Madaxweyne Farmaajo oo Ku Baaqay in La Joojiyo Dagaalka Tukaraq - Halbeeg News
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa walaac ka muujiyay dagaalka dib uga qarxay deegaanka Tuka-raq ee Gobolka Sool, dagaalka oo u dhexeeya maamulada Somaliland iyo Puntland ayaa sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
War kasoo Madaxtooyada Soomaaliya ayuu Madaxweyne Maxamed Cabdulahi Farmaajo ugu baaqay madaxda, odayaasha dhaqanka, culumada diinta, ururrada bulshada rayidka ah, haweenka iyo dhallinyarada in ay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaallada haatan socda.
“Waxaa nasiib darro ah in uu dhiig daato, waliba xilli loo diyaar garoobayo gudashada acmaasha bisha barakeysan ee Ramadaan” ayuu yiri madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in loo baahan yahay in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaday deegaanka Tukaraq.
“Waa in dagaalka Tuka-raq si degdeg ah oo shuruud la’aan ah lagu joojiyaa, wax walbana loo maraa dariiqa wadahadalka” ayuu yiti madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale, baaq u diray beelaha walaalaha ah ee maalmihii lasoo dhaafay ay dirirtu ku dhex martay deegaanka Ceel Afweyn ee Gobolka Sanaag isagoo tacsi u diray ehelada iyo qaraabada dadkii ku geeriyoday Tuka-raq iyo Ceel Afweyn, wuxuuna Alle uga baryay inuu dhaawaca bogsiiyo.
Weli si rasmi ah looma xaqiijin khasaaraha ka dhashay dagaaladan saakay ka qarxay Tukaraq.
Waxaa maalmihii ugu dambeeyey soconayey dedaallo badan oo lagu doonayey in lagu qaboojiyo xiisadda dagaal ee ka dhaxeysa maamulada Puntland iyo Somaliland.
Musharax Shaaciyay inuu u Tartamayo Kursigii uu Banneeyay Taliyaha Nabad Sugidda